Irana: “Niandry 40 Taona Ireo Amerikana. Ary Isika?” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2018 6:14 GMT
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny novambra 2008)
Blaogera iraniana marobe no naneho hevitra, momba ny fandresen'i Obama tamin'ny fampitahana ny demokrasia amerikana sy ny zava-misy ao Iràna amin'izao fotoana izao.
Nikahang Kosar [amin'ny fiteny farsi], blaogera iraniana sady mpanao sariitatra iray tena malaza, no mamintina aminà sary iray izay manasaraka an'i Obama amin'ilay filohampirenena reformista taloha Mohammad Khatami.
Tao anatin'ny lahatsorany, miverina amin'ny fihetsiketsehana ho an'ny fahalalahana sivika nataon'i Martin Luther King i Deserter [amin'ny fiteny farsi], ny famonoana azy tamin'ny 1968, ary mahatsiaro ny fanambaràna nataon'ny vadin'i Martin Luther King nandritra ny fandevenana azy: hafiriana no tsy maintsy hiandrasana mba hisitrahana fahalalahana?
Ny valiny dia: 40 taona.
Noporofoin'i Etazonia fa afaka misintona lesona avy amin'ireo hadisoany ry zareo… 40 taona izay, tao Iràna, tsy nananjo haneho ny heviny ny marksista iray, ary tsy nisy zavatra niova. 40 taona izay, niaina tamin'ny vola niditra avy amin'ny solika ny firenena, ary izay foana ny zava-misy. 40 taona izay, niharan'ny tsindry ny tovovavy mpianatra iray tamin'ny anjerimanontolo, izay nisalotra voaly. Ankehitriny, ilàna vanint ny mpianatra iray tsy te-hisalotra voaly. Niandry 40 taona ireo Amerikana. Ary isika, hafiriana no tsy maintsy hiandrasantsika?
Mampahatsiahy ny Iwishpolitics [amin'ny fiteny farsi] fa mifanohitra amin'ireo faminanian'ny filoha iraniana Mahmoud Ahmadinejad, nandresy tamin'ny fifidianana i Obama.
Mifanohitra amin'ny filoha iraniana, Nangataka tamin'ireo Amerikana rehetra i Obama mba hamerina hanorina an'i Etazonian'i Amerika. Mifanohitra amin'i Ahmadinejad, tsy nantsoin'i Obama hoe ‘osy’ ireo manam-pahaizana ary ireo mpanohitra azy, tsy nantsoiny hoe ‘mpiasa saribakoly eo ampelatanan'ireo vahiny’.
View from Iran [amin'ny fiteny anglisy], blaogera amerikana iray niaina taona maro tao Iràna mialohan'ny nipetrahany tao Eoropa, no manome sosokevitra vitsivitsy an'i Obama mikasika ny fomba hifampiraharahàna miaraka an'i Iràna:
1. Tsy mila fiedinedenana: aza mandefa fandrahonana izay tsy ho/na mety ho azo tanterahana akory… 2. Aza mihevitra ny hanaja ny lasa be voninahitry ny vahoaka ao Iràna… alohan'ny hanafoanana ireo visa, nefa ireo mpandeha efa ao anaty fiaramanidina, ny hitazona azy ireo tsy misy antony, na hanevateva ny faharanitantsain-dry zareo.
Shahriar Zanganeh, eo amin'ny Iranian.com [amin'ny fiteny farsi] mampitaha ny satan'ireo ankizy avy amina fanambadiana mifangaro ao anatin'ireo firenena roa ireo.
Ny firenena Amerikana lehibe, ao anatin'ny fahendrena evolisionerany tsy manam-petra, dia nifidy ny filoha izay amerikana amin'ny ampahany ilany ary Keniana amin'ny ampahany ilany, ho filoha faha-44. Ao anatin'ny repoblika silamo ao Iràna, ireo ankizy teraka avy amina fanambadiana mifangaro, avy amin'ny reny iraniana sy ray afgana dia tsy heverina ho toy ny iraniana, ary hita ho voahilika na dia amin'ireo zo faran'izay bitika indrindra zakain'ireo iraniana hafa aza. Marihina fa Keniana ny rain'ny filoha faha-44 ao Etazonia.
Ce billet a été d'abord été publié sur le site en anglais de Global Voices consacré aux élections américaines, Voices without Votes. ………….Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny tranonkala amin'ny fiteny anglisy, an'ny Global Voices, natokana ho an'ireo fifidianana amerikana,Voices without Votes.